Munhu mumwechete akafa, vakati wandei vakakuvara muUganda bhazi rakaputika
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » Munhu mumwechete akafa, vakati wandei vakakuvara muUganda bhazi rakaputika
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Uganda Breaking News
Munhu mumwechete akafa, vakati wandei vakakuvara muUganda bhazi rakaputika.
Kuputika kwebhazi kwakaitika mazuva maviri chete mushure mekuputika kwekuuraya munhu mumwe chete nekukuvadza vatatu padivi pemugwagwa muguta guru reKampala neMugovera, izvo zvakanzi nemapurisa "chiitiko chekutyisa".
Kuputika mubhazi pedyo neKampala kunouraya munhu mumwe uye kukuvadza vamwe vakati wandei.
Kurwiswa kwebhazi kunotevera kubhomba kwakaipisisa muKampala, kwakataurwa neISIL (ISIS), iyo yakauraya mumwe nekukuvadza vatatu.
Mapurisa ekuUganda nyanzvi dzebhomba dziri kuferefeta pakaputika bhazi muLungala.
Mapurisa eUganda akazivisa kuti munhu mumwe chete afa uye vanhu vakati wandei vakuvadzwa mukuputika kwebhazi pedyo neguta guru renyika. Kampala.
Kuputika kwakaipisisa mubhazi rekambani yeSwift Safaris kwaitika nhasi, nenguva dza5pm nguva dzemuno.
Vanhu vatatu vakapinda mu eatery umo nyama yenguruve yakagochwa ndokusiya bhegi repurasitiki rine zvinhu izvo zvakazoputika.
Mapurisa haasati azivisa kuti pane asungwa.
ISIL (ISIS) boka rakati ndiro rakakonzera kurwiswa kweKampala.
Mapurisa ekuUganda nyanzvi dzebhomba dzakatumirwa kunzvimbo yakabhomba kuLungala kuti vanoongorora kuputika uku.
Lungala inenge 35km (22 mamaira) kumadokero kwe Kampala, mune mumwe wemigwagwa ine vanhu vakawanda munyika, unobatanidza Uganda neTanzania, Rwanda, Burundi neDemocratic Republic of Congo.
Sekutaura kwemutauriri wemapurisa, nzvimbo iyi yakavharirwa pakamirirwa kuongororwa uye kuferefetwa nenyanzvi dzebhomba, uye mapurisa anogara achipa ruzivo nezve chiitiko ichi.
Mapurisa ekuUganda akapawo ruramiso achiti munhu mumwe chete akaurayiwa mukurwiswa uku, mushure mekunge chirevo chekutanga chataura kuti vanhu vaviri vafa.
Mutungamiri weUganda Yoweri Museveni mune tweet akati "kuvhima" kwevapari vemhosva kuri kuenderera mberi uye kuti "zviratidzo zvakajeka uye zvakawanda".